Ny tena sarin'ny Xiaomi Mi 9 ao anaty boaty dia manome ny antsipiriany ny famaritana azy manokana ary manamafy ny endriny eo anoloana | Androidsis
Ny tena sarin'ny Xiaomi Mi 9 ao anaty boaty dia manome ny antsipiriany ny famaritana azy manokana ary manamafy ny endriny eo anoloana
El Xiaomi Mi 9 dia kasaina ho ofisialy amin'ny Alarobia ho avy izao. Ny CEO Xiaomi Lei Jun sy ny filoham-pirenena Lin Bin dia nanambara fampahalalana ofisialy marobe momba ny fiasa lehibe amin'ny Mi 9 hatramin'ny andro vitsy lasa izay.
Amin'ity indray mitoraka ity, nipoitra vao tsy ela ny sary mivantana iray an'ny finday avo lenta miaraka amin'ny boaty fivarotany. Ilay sarimihetsika miaro hita eo amin'ny efijery Mi 9 dia manana ny mampiavaka azy. Manome antsipiriany azy ireo izahay!
Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambany, ny Xiaomi Mi 9 dia hampandehanin'ny sehatra finday Qualcomm Snapdragon 855 7 nm, toy ny efa nolazaina hatrany am-piandohana. Ny fiasa faharoa voalaza dia ny fananganana fakan-tsary telo an'ny fakantsary 48-megapixel zoro malalaka fakan-tsarin'i Sony napetraka eo ambonin'ny fitaratra ambonin'ny 3D.
Sary mivantana an'ny boaty Xiaomi Mi 9 ao anaty famaritana
Ny Xiaomi Mi 9 koa dia misy scanner scanner ao anaty fampisehoana, izany dia an'ny taranaka fahadimy. Ny tontonana dia teknolojia AMOLED ary diagonal 6.39 santimetatra. Araka ny efa nanamafisan'ny orinasa, ny fanapahan-kevitra FullHD + tohanan'ny fampiratiana-n'ny fomban-drano Mi 9 dia hanome 90.7% ny tahan'ny efijery amin'ny vatana
Ilay tifitra tafaporitsaka koa dia mampiseho fa miaraka amin'ny Mi 9 fanampiana amin'ny famahanana finday 20 watt haingana nohamarinin'ny Alemanina Rhine TUV. ny Huawei Mate 20 Pro, izay natomboka tamin'ny taon-dasa, tsy misy afa-tsy ny famahanana tsy misy tariby 15W ihany koa ny telefaona. Raha ny marina, amin'ny hatevin'ny 3,6mm ihany, ny Mi 9 dia manatanjaka ny saokanao kely manify indrindra amin'ny smartphone.
Mandeha ihany koa ny resaka fa ny Xiaomi Mi 9 Explorer Edition miaraka amin'ny fakantsary quad aoriana koa haseho miaraka amin'ny smartphone Xiaomi Mi 9 amin'ny 20 febroary. Ny Explorer Edition dia mety ahitana RAM 10GB na 12GB. Vinavina ny olona fa ny Mi 9 dia mety manana marika 3,499 yuan (~ 456 euro) ary ny Mi 9 Explorer Edition dia azo vidiana amin'ny 5,999 yuan (~ 782 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tena sarin'ny Xiaomi Mi 9 ao anaty boaty dia manome ny antsipiriany ny famaritana azy manokana ary manamafy ny endriny eo anoloana
Ny famerenana ny LG V50 ThinQ 5G dia manambara ny fisehoany rehetra: naseho koa ny daty fanombohana